Umbutho - Ihlabathi ngoMatshi
Emva kweminyaka elishumi emva 1ª World March umbutho wethu ubuya ukuqhubeka nokufikelela abantu abaninzi
La I-1ª Ihlabathi leNkqantosi yoxolo noKhuselo Wenza malunga neemeko eziliwaka kwiidolophu ze400 awathabathela kwii-97 kumazwekazi ase-5. Ngaphezu kwemibutho ye-2000 ithathe inxaxheba. Phantse amawaka amabini amawaka eekhilomitha ayehamba kwaye amakhulu amabili abantu bathatha inxaxheba.
Con la experiencia acumulada y contando con suficientes indicadores de tener participación, apoyos y colaboraciones aún mayores… Se plantea realizar esta 2ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia 2019-2020.
Ukuba ufuna ukwazi kabanzi nge-1ª Matshi sinemithombo yokukunika yona:
Unokukhuphela kwi-free Incwadi yeHlabathi yeNtshona oqokelela ezinye zezinto ezibalaseleyo zelo nyathelo elikhulu.
Unokwazi ngokucacileyo oko kwenzeka kwiwebhsayithi elidala 1ª World March
Yintoni na? Wethu msebenzi
Ukugxeka imeko yehlabathi eliyingozi ngokunyuka kweengxabano, ukunyuka kweendleko kwiimpahla ngexesha kwiindawo ezininzi zeeplanethi abaninzi abantu bebambezeleka ngenxa yokuntuleka kokutya kunye namanzi.
Ukuqhubeka nokudala ukuqonda ukuba kuphela "uxolo" kunye "nokungabi nonyango" ukuba iintlobo zabantu ziya kuvula ikusasa layo.
Ukujonga ngolu hlobo izenzo ezintle ezihlukeneyo ezahlukahlukeneyo, abantu, abaqokelelwane kunye nabantu bahlakulela kwiindawo ezininzi kwindlela yokusebenzisa amalungelo oluntu, ukungabandlulululwa, ukubambisana, ukuhlala kunye noxolo.
Ukunika ilizwi kwizizukulwana ezitsha ezifuna ukuthatha kunye nokushiya uphawu lwabo, ukufaka inkcubeko yokungabikho kobugwenxa kwiingcinga ezihlangeneyo, kwimfundo, kwezopolitiko, kuluntu ... Ngendlela efanayo kwiminyaka embalwa ukuqonda kwendalo
Iqela le-Promoter (EP) eliza kuvela kwizenzo kunye neeprojekthi eziphakamisayo kwisiseko sezenhlalakahle, ngomoya "ngamnye uyakunakekela oko akwenzayo".
Kwamazwe ane-PE kwiidolophu eziliqela, iqela leQela loPhuhliso lweLizwe liya kusekwa. Kula ma-EPs, imibutho eninzi njengabantu abanokuthatha inxaxheba.
Ezi zikolo ziya kunikwa njengendlela kunye nomsebenzi womsebenzi, ubungqamaniso, isimo sengqesho kunye nentsebenziswano yokulungelelanisa amanyathelo.
Platforms inkxaso (PA)
Ziye zenziwe ngabantu, amaqela kunye namaziko.
Ezi ziindawo zokuthatha inxaxheba ezibanzi kwaye zihluke kakhulu kunee-EPs, apho kuninzi inani lamanyathelo anokunikwa, umzekelo ngamacandelo (ootitshala, abatsha, abafazi) okanye ngeendawo (ummandla, umzi, iyunivesithi), njl.
I-PA iya kuba nommeli okanye iqhagamshelana ne-EP yesixeko.
Ukulungelelanisa ulwahlulo lwamanyathelo, iikhalenda kunye neendwendwe, ummandla woqhagamshelwano ngamazwe ngamazwe kunye nemimandla iyadingeka.
Nini na kuphi?
La 2ªMM ziya kuqala Madrid el I-2 Oktobha, i-2019, Usuku lwaMazwe ngamazwe loNgcoliseko, diez años después de la 1ªMM. Iya kushiya kwicala Afrika, eMntla Melika, eMbindi naseMzantsi, ukuxhuma Oceania, kuhamba Asia kwaye ekugqibeleni EYurophu, fi kelela Madrid el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Después de circunvalar el planeta con una duración de 159 días. Se estima que la 2ªMM Iya kuhamba ngamazwe angama-100 kunye namakhulu amawaka abavukeli-nxaxheba baya kuthatha inxaxheba kulo msebenzi wehlabathi jikelele.